PPE ကို သင်္ကန်းပေါ်မှာ ဝတ်ဆင်ကာ ပြည်သူတွေကို ကူညီပေးရင်း ပျံလွန်တော်မူခဲ့ရတဲ့ ဦးဇင်းသုဇန | D Daily News
Home Local News PPE ကို သင်္ကန်းပေါ်မှာ ဝတ်ဆင်ကာ ပြည်သူတွေကို ကူညီပေးရင်း ပျံလွန်တော်မူခဲ့ရတဲ့ ဦးဇင်းသုဇန
PPE ကို သင်္ကန်းပေါ်မှာ ဝတ်ဆင်ကာ ပြည်သူတွေကို ကူညီပေးရင်း ပျံလွန်တော်မူခဲ့ရတဲ့ ဦးဇင်းသုဇန
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဝမ်းနည်းစရာ သတင်းလေးပါ။ လူ သား တွေ ဒု က္ခ နွံနစ်နေတာကို ဒီအတိုင်း မကြည့်ရက်လို့ ကိုယ်တိုင် P P E ဝတ်စုံဝတ်ဆင်ကာ ကူညီ ပေးနေတဲ့ ဦးဇင်း သုဇန ကွယ်လွန် တော် မူသွားခဲ့တဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
ယခင်ရက်တွေတုန်းကရော လတ်တလော အခြေနေမှာရောအားလုံးက ကူး စက် ခံရနှုန်းက တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုပိုများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ တချို့ကတော့ negative ပြကာ သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားကြပေမယ့်အမ်ားစုကေတာ့ positive ပြပြီး ကျန်ရှိနေတုန်းပါပဲ။
အများစုရဲ့ အဓိက ပြဿနာက အောက်. စီ. ဂျင်. ထိုးကျပြီး အောက်. စီ. ဂျင်. မရှုရလို့ သေဆုံးသွားကြတာကပိုများပြားပါတယ်။ လူငယ်တွေရော ပရဟိတ အသင်းတွေရောက တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးနေကြပေမယ့် လူအင်အားက လိုအပ်နေကြပါသေးတယ်။
ဘုန်းဘုန်းက လူသားတွေအပေါ်မှာ သနားဂရုဏာထားကာ စေတနာအပြည့်နဲ့ ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ဦးဇင်းရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပျံ့နှံ့လာကာဦးဇင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို လူအများက လေးစားကြပြီး ကြည်ညိုခဲ့ကြပါတယ်။
နောက်ပြီး ဦးဇင်း ကျန်းမာရေးလည်း မထိခိုက်ဖို့ ပြည်သူတွေက အျမဲ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ နေ့တိုင်းဆိုသလို ဒီကူး စက် လူနာတွေကို ထိတွေ့နေရတာကြောင့် ဦးဇင်းလည်း င ဗစ် ကူးစက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရကာ ပ်ံ လွန် တော် မူ သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းလေးဟာ ပြည်သူတွေကို အရမ်းကိုမှ ဝမ်းနည်းစေခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီး ဘုရားသားတော်ဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးအချိန်မှာလည်း
အားလုံးကို ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာမို့ ကောင်းရာ ဘုံဘဝ ရောက်ရှိဖို့ကို ဆုမတောင်းပေးရင်တောင် ပြည့်မယ်ဆိုတာ သိကြပေမယ့်လည်း ရင်ထဲအရမ်းမကောင်းကြလို့
ဦးဇင်းကို ကောင်းမွန်ရာ ဘုံဘဝ ရောက်ရှိဖို့ ဆုတောင်းပေးနေကြပါတယ်။ သာသနာအကျိုးကိုလည်း သယ်ပိုးပြီး လူသားတွေရဲ့ အကျိုးကိုပါ သယ်ပိုးပေးခဲ့တဲ့ဦးဇင်း သုဇန ကောင်းရာ ဘုံဘဝရောက်ရှိပါစေဗျာ။ အမြဲတမ်း ကြည်ညို လေးစားသွားမှာပါ။ ဦးဇင်းရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးထံ မွ်ဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Previous articleမကွေးတွင် စစ်တပ်က တပ်စွဲထား၍ အနီးအနားကျေးရွာများ အလုံးအရင်းဖြင့် ထွက်ပြေး(ရုပ်/သံ)
Next articleဒီလိုမျိုးတွေ မြင်ရကြားရတာ ရင်ထဲမကောင်းဘူးဗျာ